Il consiglio di oggi 10 Settembre 2020 di San Massimo il confessore | Io amo Gesù
Kansụl nke taa 10 Septemba 2020 nke San Massimo onye nkwupụta
San Massimo onye nkwuputa (ca 580-662)
mọnk na ọkà mmụta okpukpe
Centuria m na ịhụnanya, n. 16, 56-58, 60, 54
Iwu nke Kraist bu ihunanya
“Onye ọbụla hụrụ m n’anya, ka Onye-nwe kwuru, ga-edebe ihe m nyere n’iwu. Nke a bụ ihe m nyere n’iwu: hụrịta ibe unu n’anya ”(lee Jn 14,15.23; 15,12:XNUMX). Ya mere, onye na-ahụghị mmadụ ibe ya n’anya anaghị edebe iwu ahụ. Na onye ọ bụla nke na-anaghị edebe iwu ahụ amaghi otu esi ahụ Chukwu n’anya. (...)
Ọ bụrụ na ịhụnanya bụ mmezu nke iwu (cf. Rom 13,10: 4,11), onye iwe na nwanne ya nwoke, onye na-akpa nkata megide ya, onye na-achọ ya ihe ọjọọ, nke na-atọ ya ụtọ ọdịda ya, kedu ka ọ ga - esi ghara ịda iwu na erughị eru inweta ntaramahụhụ ebighị ebi? Ọ bụrụ na onye ahụ na-ekwutọ ma na-ekpe nwanna ya ikpe na-ekwutọ ma na-agbaso iwu (cf. Jas XNUMX: XNUMX), ma ọ bụrụ na iwu nke Kraịst bụ ịhụnanya, dịka onye nkwutọ ahụ agaghị ada site n’ịhụnanya Kraịst ma tinye onwe ya n’okpuru yok nke ntaramahụhụ ebighị ebi?
Egela ntị n’okwu onye nkwutọ, ma ọ bụ kwuo okwu na ntị onye nwere mmasị ikwu okwu ọjọọ. Chọghị ikwu okwu megide onye agbata obi gị ma ọ bụ gee ntị n'ihe ekwuru megide ya, ka ị ghara ịda site n'ịhụnanya Chineke wee ghara ịbụ onye ọbịa nke ndụ ebighị ebi. Mechie ọnụ nke ndị na-ekwutọ gị na ntị ka ị ghara iso ya mehie abụọ, ị na-amata ihe ọjọọ ma ghara igbochi onye nkwutọ ahụ ikwu okwu ọjọọ na agbata obi onye agbata obi ya. (...)
Oburu na nkpuru obi nile nke Mo Nso, nenwegh i ihunanya, abagh uru nye ndi nwere ha, dika onye ozi Chineke si di (1 Kor 13,3)